डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण घट्यो, ५१९ जनामा डेङ्गु | Nepali Health
डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण घट्यो, ५१९ जनामा डेङ्गु
२०७३ कार्तिक २२ गते १६:२२ मा प्रकाशित
चितवन, २२ कात्तिक – चितवनमा प्रकोपका रुपमा फैलिएको डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण घट्दै गएको पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार भदौ असोजमा भन्दा अहिले सङ्क्रमण दर घट्न थालेको हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामकुमार केसीले कात्तिकको दोस्रो सातादेखि सङ्क्रमण दरमा न्यूनीकरण भएको बताए । तर पनि डेङ्गुका बिरामी भेटिने क्रम रोकिएको छैन, सचेतनामा स्थानीयवासीले ध्यान दिन जरुरी छ, केसीले भने ।
जिल्लामा भदौ महिनादेखि कात्तिकको अहिलेसम्म ५१९ जनामा डेङ्गु रोग लागेको जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले पुष्टि गरेको छ । तीमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत सङ्क्रमण रत्ननगर नगरपालिकामा छ । रत्ननगर बकुलहर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलले विगतमा भन्दा अहिले अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामी घटेको बताए ।
पहिले आएका बिरामीमध्ये अधिकांश डेङ्गुका हुन्थे, डा. पौडेलले भने – “अहिले बिरामी घटेका छन् । यसअघि भरतपुर र रत्ननगरको बजार क्षेत्रमा २० हजार घर अनुगमन गर्दा ८०२ घरमा डेङ्गु पोजेटिभ पाइएको थियो ।”
जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको सूचना अधिकारी नरहरि शर्मा बताउछन् । यो वर्ष नेपालमा १३ जिल्लामा डेङ्गु देखिएको छ । यसको खास उपचार पत्ता नलागेकाले लक्षणका आधारमा औषधि दिने गरिएको छ । रासस